I-Archives Jikelele - Amalungelo Abantu Nezithombe Zokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
#Sextourist Embassy Thailand Lightart Ukuqagela
กองกอง ุนพิพิ ักษ์ักษ์ตประชาธิป ไ - --เรา กเลิกกเลิก Septhemba 4th, 2020Oliver Bienkowski
[gallery_bank type = "images" format = "masonry" title = "true" desc = "false" respondive = "true" display = "selected" no_of_images = "17 ″ sort_by =" okungahleliwe "animation_effect =" bounce "album_title =" iqiniso ”i-albhamu_id =" 22 ″]
Isikhwama sokuvikela umbhikisho wentando yeningi waseThailand - sichitha ubukhosi e Thailand Septhemba 4th, 2020Oliver Bienkowski
22 Kwangathi 2016
Umkhankaso: Yeka ukuhweba kwezikhali!
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 22. May 2016
Misa umkhankaso wokuhweba ngezandla
Umndeni wakwa-Oetker ulungele
I-Saudis isesezinkampanini ezibaluleke kakhulu izinkampani zokuvikela zaseJalimane. Engxenyeni yokuqala ye-2015, ukuthengiswa kwezingalo ezibiza ama-180 million euro kuya eSaudi Arabia kuvunyelwe - kuphela nge-Great Britain nase-Israel, kuneziphesheli ezinkulu nakakhulu.
Umkhankaso: Yeka ukuhweba kwezikhali! Julayi 1st, i-2019Oliver Bienkowski
Izikhwama zesipho zezingane ze-333
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 24. December 2014
Izikhwama zesipho ze-333 zezingane
NgoKhisimusi sinikeza izikhwama zomsizi emigodini yaseMarrakech. Lokhu ukukhuthazwa UKhisimusi isiko nge kukaMoya amadala ngoKhisimusi ngoba umsunguli-Pixel Helper Attac lithole umklomelo "Qala revolution akho".
Izikhwama zesipho zezingane ze-333 Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
Ukukhiqizwa kwesandla se-3D
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On I-14. Novemba 2014
Saqala ukunyathelisa i-Robohand kumshicileli wethu we-Ultimaker 3D. Ngokuhamba kwesikhathi, sathola ulwazi futhi sashintsha ukukhiqiza eSpain enkampanini yokunyathelisa, okusihlinzeka ngezandla ngokuhlangana ngemva kokukala izingane kanye nabantu abadala.
Ukukhiqizwa kwesandla se-3D Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
24 I-Oct 2014
Ukulungisa kabusha kwe-Land Rover Defender
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 24. October 2014
Ukuguqulwa kwe-Landrover Defender ukuya ekuhambeni kwezindawo zezinhlekelele.
Ukulungisa kabusha kwe-Land Rover Defender Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
21 I-Oct 2014
I-Global Entrepreneurship Summit eMarrakesh
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 21. October 2014
I-Global Entrepreneurship Summit uMarrakesh 2014. Umholi wethu wesahluko waseMoroccan wakwazi ukunquma emiphakathini yePixelHELPER njengengxoxo yokudlulisela phambili kanye neholayo ngemuva kwezigcawu ngokubambisana okuqhubekayo. Njengoba i-White House yayingumlingani we-GES 2014, saze sahlangana no-Vice President we-US Biden eMhlanganweni Wezihambeli.
I-Global Entrepreneurship Summit eMarrakesh Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
15 I-Oct 2014
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 15. October 2014
Londoloza i-World Congress, i-Bonn. Inkundla Yemidlalo Yeshashalazi Bonn bahlela Congress kwezobuciko-yesayensi ngokubambisana neNhlangano Beethoven Festival, Office Foreign futhi ahlukahlukene-United Nations kanye nezinye NGOs emizimbeni ku Bonn. Ngaphansi kwesihloko esithi "Sindisani WORLD - A uhambo nakancane nezingcweti, abaculi kanye ososayensi" Akufanele siphume lomhlangano izikhungo, amahholo laboratories wenza isipiliyoni sezinzwa enkundleni ukuze izinkinga ebanzi yomphakathi womhlaba wonke lwesintu futhi ngekwetimongcondvo tawo. I-PixelHELPER isesayithi enegama layo lokwaziswa futhi inike izethameli umbono wokuqala wephrojekthi ye-PixelHELPER.
Londoloza i-World Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
07 I-Oct 2014
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 7. October 2014
Cubik eZizwe Ezihlangene. I-Magic Cube, ethengwe yiPixelHELPER futhi ihamba ngamazwe e-40 emhlabeni wonke, yanikezwa nguNuseir Yassin kwiZizwe Ezihlangene futhi yathumela eMorocco.
I-PixelHELPER Cubik e-UN Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
10 Septhemba 2014
Ukusabalalisa amasethi esikoleni
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 10. Septemba 2014
Buyela esikoleni eMorocco. Ukusabalalisa IziKolo zeSikole eduze Nezikole - Ama-avatars ethu e-PixelHELPER avela ekusakazweni okufakiwe eMarrakech ahlale exhumana ngqo nezingane ezisuka emizaneni esiyisebenzisayo eduze neMarrakech. Sizilungiselele okuningi ukuqala kwesikole.
Ukusabalalisa amasethi esikoleni Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
I-Maroc Yokuqalisa Ukuqala Komphakathi
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 30. August 2014
I-Final round Maroc Social Creative Ukuqalisa Cup, i-2. Indawo. Yebo iMorocco ayithumeli iqembu laseJalimane eCopenhagen ngezimali zomhlaba wonke ze "Creative Cup Cup". Yingakho kwakudingeka sibekezelele i-2. Ijaji lahlatshwa umxhwele yilokho esikulo mqondo.
I-Maroc Yokuqalisa Ukuqala Komphakathi Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
Ukusabalalisa kwamathoyizi kanye nezincwadi zokuzivocavoca
Ukusabalalisa kwamathoyizi kanye nezincwadi zokuzivocavoca ezintabeni zase-Atlas ngaseMarrakech. Kanye ne-Abury Foundation esisebenza lapho, sahambisa amathoyizi futhi sisusa udoti lapho.
Ukusabalalisa kwamathoyizi kanye nezincwadi zokuzivocavoca Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
Izimpahla zokusiza eMarrakech
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 17. August 2014
Ukusabalalisa kweminye imikhiqizo engasiza ezintabeni zaseMarrakech. Sivame ukulayisha imoto yethu futhi sisakaza izinto eziningi zokusiza emadolobheni aseMarrakech.
Izimpahla zokusiza eMarrakech Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
I-PixelHELPER Gamescom idokodo
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 13. August 2014
I-Gamescom 2014 - idokodo lethu le-PixelHELPER
I-PixelHELPER Gamescom idokodo Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
I-Gamescom Trailer e-Palmeraie i-Marrakech
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 12. August 2014
Ukudubula i-trailer ye-Gamescom ePalmeraie eMarrakech. Kanye nomkhiqizi owaziwa kakhulu u-Youness Mouthadi senze i-Trailor ngokuthengisa kwethu kokuqala. Ukuze sigcizelele umqondo wekusasa we-PixelHELPER, sashintshe imiphumela kusukela ku-Stargate yefilimu.
I-Gamescom Trailer e-Palmeraie i-Marrakech Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
Isivivinyo sokudluliselwa kwevidiyo
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 11. August 2014
Isivivinyo sokudluliselwa kwevidiyo kumazwe omhlaba ahlukumezekile nge-Ustream.
Saqaphela masinyane ukuthi emazingeni okushisa angaphezu kwama-40 degrees, i-hardware idinga ukucola. Lapha ungabona iphuzu lokufinyelela le-WLAN yeselula ngebhethri elayishwayo.
Isivivinyo sokudluliselwa kwevidiyo Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 8. August 2014
Ukugunyazwa kokusabalalisa kwemikhiqizo engasiza eMorocco kuze kube ngonyaka we-3013. Ngokuqinisekile nje u-typo kuphela, kodwa okungenani asidingeki ukuba sibuze zonke izinyanga ezimbalwa manje.
Ukuvunyelwa kokusabalalisa Julayi 15th, i-2016Oliver Bienkowski
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 18. Julayi 2014
Izingxoxo ngephrojekthi yethu yePixelHELPER ku #Marrakesh. Idrama yomhlanganyeli. U-Mohamed Kalakhi we-Embassy yoMbuso we #Marocco ku #Berlin
18. Julayi 2014 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 6. Julayi 2014
Ukusabalaliswa kokuqala emibhawulweni yaseMarrakech. Sibeka ukubaluleka okukhulu ekuthuthukiseni imvelo yethu. Ngakho saqala ngokushintshanisa i-palmentore emasangweni ensimbi futhi sathola amanetha kulabo abasha bebhola.
06. Julayi 2014 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
02 Jula 2014
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 2. Julayi 2014
Qala iphrojekthi; Isivivinyo sokuqala sobuchwepheshe. Okokuqala kufanele sisho ukuthi isivinini se-Inthanethi sasimbi kakhulu ekuqaleni. Kwakudingeka sishintshe okuningi futhi sihlele ne-Afrika. Ekugcineni sasebenza kodwa kahle futhi singakwazi ukwethula zonke izici esizihlele.
02. Julayi 2014 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
Fika ku-Marrakech nethimba le-PixelHELPER. Ekupheleni kwezindiza sakwazi ukuthatha isithombe ku-cockpit ngaphambi kokuya eMedina yaseMarrakech futhi sibhekene nazo zonke izinhlobo zokuhlukahluka kwezamasiko eYurophu.
30 Kwangathi 2014
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 30. May 2014
Ukulungiselela kuqala kwe-AlphaTest Hardware ye-Afrika e-Düsseldorf; Ukusebenzisa amakhompiyutha e-Rasberry Pi nekhamera encane kanye nokwakheka kwelanga kanye nebhange lebhethri yelanga.
01. May - 30. May 2014 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 30. Apreli 2014
Ukuguqulwa kwama-drones ezindiza, i-drones yesikebhe kanye ne-drones eziteshini ze-intanethi ezihamba ngezinsiza zokuqala zokusiza ezindawo zezinhlekelele. Ukuhlolwa kokusebenza kwenziwa emva kokuqaliswa ngempumelelo kwepulatifomu ye-Lystreamream crowdfunding.
04. April - 30. April 2014 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
18. Apreli 2013
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 18. Apreli 2013
Ukuhlolwa kwe-Alpha ye-drones yokulethwa kwi-Dusseldorf Exhibition Centre ye-Dokumi. Sasivivinya isikhwama sethu se-AVATAR ngekhamera esiteji nesikhala esanele samandla amabhange we-smartphone ukuze kuqhutshekwe okuqhubekayo ku-Kriesengebieten. Le drone kagesi, izosetshenziswa esikhathini esizayo ku-Kriesgebieten ngama-avatars kaPielelHELPER ukusiza abantu abathintekile nge-intanethi yokuxhumana nge-intanethi nezwe langaphandle.
18. Apreli 2013 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 19. December 2012
Umculi okhanyayo nomsunguli wePixelHELPER u-Oliver Bienkowski wenza ukufakwa kwe-laser ku-Skyspace kaJakobe Turrell ku-Light Art Centre Unna. Waxhuma umbhoshongo ngombhoshongo wesonto eliseduze. Ezinye izithombe zifakwe nge-drone. Lawa ma-drones anikeza ukusetshenziswa okuhle njengendawo yocingo yeselula ye-satellite enikeza ukufinyelela kwe-intanethi kubantu abathintekayo. Ubuchwepheshe bokukhanya kwelanga kufike ku-aviator ye-FPV engasetshenziselwa izinhlangano zangasese nezinsizakalo ezincane abantu ezindaweni ezikude ezithinteka izinhlekelele zemvelo Inthanethi ingaletha. Ikakhulukazi uma kwenzeka izinhlekelele, kuyinto ebaluleke kunazo zonke kulabo abathintekile nabancike ekutheni bakwazi ukuxhumana. Bambalwa abantu emazweni athuthukile bangacabanga namuhla ngaphandle kwegesi kanye ne-intanethi.
19. December 2012 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
09. Apreli 2012
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 9. Apreli 2012
Sihlola ukuhanjiswa kwe-FPV (First Person View) yezimpawu zevidiyo esikebheni. Ngama-antenna anamandla ungakwazi ukukhulisa isignali yevidiyo ukuze ukwazi ukuhamba nge-drone ehamba phambili e-Luxembourg yonke, njengoba uRaffhael Pirker weThimbaBlackSheep esivele efakazelwe. Esikhathini esizayo sifuna ukusebenzisa ukuthutha, i-intanethi kanye ne-drones yokuqala yokusiza emhlabeni jikelele, ekhokhelwa imali yePixelHELPER yesikhulumi se-Livestream Crowdfunding.
09. Apreli 2012 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
01. Apreli 2012
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 1. Apreli 2012
I-drone yemoto yenza izinkomba zayo esiteshini esidala sase-NATO e-Neuss (Hombroich). Ku-drone encane kukhona namanje ama-drones okuthutha.
01. Apreli 2012 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 7. March 2012
Ngamaflaya e-FPV ngendlela yamaphiko, izikhathi zesikhathi eside zendiza zingatholakala ngokuhambisana namaseli aso. Ezinhlekelele, abantu bangafinyelela kude namakhilomitha angu-30-70, kuye ngokuthi amandla okudlulisa emsakazweni, nalawa ma-drones aphiko futhi abanikeze nge-intanethi baze babuyiselwe.
07. March 2012 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski
I-29. Novemba 2011
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On I-29. Novemba 2011
Isisekelo se-Think Tank PixelHEPER eV e-Neuss, eJalimane. Ngokusekelwe kulolu sisekelo, sinqume ukuqala ngePixelHELPER. Ngaleso sikhathi, sifuna ukuhambisa iSlumdog Tycoon, umdlalo ohlukile ongaguquguquki ube yindawo yesikhulumi se-crowvesting emva kokucubungula kuqala kanye nokucubungula izikhathi.
I-29. Novemba 2011 Okthoba 7th, i-2015Oliver Bienkowski